Qeexida Resistance iyo Taageerada Thomas DeMark's dhibcaha dhibcaha Pivot | FXCC Blog
Aug 8 Xisaabiyaha Xisaabta • 32745 Views 5 Comments on Defines Diristii iyo Taageero la leh Thomas DeMark's dhibcaha dhibcaha Pivot
Qodobada Pivot waa astaamaha iyo taageerada, waxaana jira dhowr xisaabiye oo loo yaqaan 'calculators' kuwaas oo loo sameeyay si loo go'aamiyo qodobbada istiraatiijiga ah. Hase yeeshee, ku dhawaad ​​dhammaan xisaabiyeyaasha miisaanka xisbigu waa calaamadaha la soo bandhigay oo ay curyaantoodu ku fashilmeen inay ku fashilmaan isbeddellada mustaqbalka.
Khadadka asaasiga ah iyo khadadka taageerada waxaa lagu soo rogaa iskuxirida dushooda iyo hooseeyaha waxayna sii dheereynayaan safka hore si loo qiimeeyo dhaqdhaqaaqa qiimaha mustaqbalka. Si kastaba ha noqotee, qaabkan dhaqameedkani ma aha mid ujeedo iyo wax badan oo qarsoon. Haddii aad weydiisatid laba qofood oo kala duwan inay sawiraan dirxiyada ama khadadka taageerada, waxaad yeelan doontaa labo khad oo kala duwan. Tani waa sababta oo ah shakhsi kasta wuxuu leeyahay qaab kale oo wax ku ool ah. Habka Tom Demark waa hab fudud oo si sax ah loo sawirayo khadadka qaabeedka ah khadadka taageerada iyo dirista.
Marka la eego qaabka Tom Demark, sawirada khadadka isbeddelku wuxuu noqonayaa mid ujeedo leh isla markaana si sax ah u go'aaminaya taasoo tilmaamaysa inuu ku xirmi doono khadadka taageerada iyo khilaafyada. Marka la barbar dhigo xisaabiyeyaasha kale ee xisaabiyeyaashu waxay soo saari karaan xariijimaha kaliya ee siman iyagoo metelaya iska-caabbinta iyo dhibcooyinka taageerada, habka DeMark ayaa go'aaminaya tilmaamaha lagu xirayo si ay u metelaan dirista iyo taageerada iyo sidoo kale saadaasha jihada qiimaha mustaqbalka.
Habka Tom Demark wuxuu culeyska saaraa xogta ugu dambeysa marka loo eego jaangooyooyinka qiimaha hore ee ganacsiga. Xarriiqyada isbeddelka waxaa lagu xisaabiyaa lana barbardhigaa midigta bidix halkii laga tagi lahaa dhaqanka bidix illaa hab sax ah oo loo adeegsado xisaabiyaha kale ee xisaabinta. Oo, halkii laga dhigi lahaa dib u soo celinta iyo taageerada sida R1 iyo S1, De Mark waxay ku soo qoreen dhibcaha TD iyagoo wacaya xarigga iyaga oo ku xiraya khadadka TD.
DeMark waxay isticmaashaa waxa uu ugu yeeray shuruudaha runta taas oo asal ahaan asal u ah aasaasiga asaasiga ah ee dhibcaha TD si sax ah loo go'aamiyey. Shuruudaha DeMark ee runta ah waa sidan soo socota:
Baahida qiimaha qiimaha miisaankeedu waa qadarka hoose ee fadhiga qiimaha fadhiga hadda waa in uu ka hooseeyaa qiimaha xiritaanka ee labadii hore ee hore.
Qiimaha sicirka ee sicirka waa sarrifka sare ee fadhiga qiimaha hadda waa in uu ka sarreeyaa qiimaha xiritaanka ee labadii hore ee hore.
Marka la xisaabinayo khadka TD ee horey loogu sii wadi karo qiimaha riwaayadda, qiimaha la xirayo ee xiga waa inuu ka sareeyaa lineka TD.
Marka la xisaabinayo qiimaha fallaadhaha TD-da ee qiimaha korantada, qiimaha xiritaanka ee xiga waa inuu ka hooseeyaa lineka TD.
Shuruudaha kor ku xusan waxay noqon karaan kuwo ku wareeray bilawga laakiin waxaa loola jeedaa in la kala saaro khadadka la soo dhejiyay iyadoo lagu saleynayo qaaciddada DeMark ee xisaabinta masraxyada iyo taageerooyinka ama qodobbada istiraatiijiga ah:
Foomka DeMark waa sida soo socota:
DeMark waxay isticmaashaa tiro khaas ah X si loo xisaabiyo heerka sare ee caabiga iyo taageerada hoose.
Wuxuu xisaabiyaa X sida soo socota:
Haddii Ugu Dheer <Furan kadib X = (High + (Low * 2) + Xidh)
Haddii Hore> Furan kadib X = ((sare * 2) + Low + Close)
Haddii Xiritaan = Furan kadib X = (Heer sare + Low + (Close * 2))
Isticmaalka X sida tixraaca tixraaca, wuxuu xisaabiyaa iska caabida iyo taageerada sida soo socota:
Heerka sare ee Resistance R1 = X / 2 - Low
Heerka taageerada hoose S1 = X / 2 - Heer sare
« Maxay u Isticmaalaan Xisaabinta Dhabarka? Sida Loo Isticmaalayo Xisaabiyeyaasha Pointing Pivot ee Ganacsi Lacageed »